” ကူညီပါရစေ “ ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ် မရှိခင်ကတည်းက လူတန်းစား အဆင့်အတန်းမခွဲခြားဘဲ ကူညီခဲ့တဲ့ စံပြ ရဲဝန်ထမ်းကောင်းကြီးမောင်ဖိုးစံ ( ဒူးယား ) – Na Pann San
Na Pann San W | February 16, 2020 | Knowledge | No Comments
” ကူညီပါရစေ ” ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ် မရှိခင်ကတည်းက လူတန်းစား အဆင့်အတန်းမခွဲခြားဘဲ စိတ်စေတနာအရင်းခံနဲ့ ကူညီခဲ့တဲ့ စံပြ ရဲဝန်ထမ်းကောင်းကြီး မောင်ဖိုးစံ ( ဒူးယား )… သို့..ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်း
ဖေဖဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့ ၊ တိတိကျကျပြောရရင် လူငယ်ချစ်သူစုံတွဲတွေ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့နေ့ မှာ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေတစ်ယောက် ၊ ညီရင်းအကိုလို ချစ်ခင်ရတဲ့ ဒုရဲမှူး စံသိန်းကတော့ သူချစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ကြီးကို ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ သက်ပြည့်ပင်စင်ယူပြီး ရာသက်ပန် အနားယူလိုက်ရတဲ့ ဒီနေ့ချစ်သူများနေ့ဟာ သူ့ဘဝအတွက် ချစ်လျှက်နဲ့စွန့်ခွာခဲ့ရတဲ့ အမှတ်တရနေ့လေး တစ်နေ့ပါဘဲ..
ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့မှာ အင်မတန်ကို စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိခဲ့တဲ့ ရဲဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်သလို သူနဲ့ကျွန်တော် ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့တဲ့ သက်တမ်းက နှစ် ၂၀ တင်တင်းရှိခဲ့ပြီမို့ ယခုလိုဂုဏ်ပြုရေးသားရခြင်းပါ ၊ ကျွန်တော့် လိုဘဲ သူနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့ဖူးသူမိတ်ဆွေမှန်သမျှ ၊ ရဲဝန်ထမ်းအချင်းချင်းမှန်သမျှ သူ့ရဲ့ကောင်းသတင်းတွေကိုဘဲ ချီးကျူးထောပနာပြု ပြောဆိုနေကြသူတွေချည်းမို့ အားလုံးနှမြောနေကြမှာပါ…
စံပြ ရဲဝန်ထမ်းကောင်းကြီးမောင်ဖိုးစံ ( ဒူးယား )
သူ့ ရဲ့ ရဲလုပ်ခဲ့တဲ့ သက်တမ်းတစ်လျှောက် ရောက်တဲ့နေရာ ၊ တာဝန်ကျရာနေရာမှန်သမျှ ဒေသဖွံ့ဖြိုရေးဆိုင်ရာအကျိုး ၊ ရပ်ရွာရဲ့ဘာသာ သာသနာအကျိုး ၊ ဌာနအကျိုးတွေကို ကိုယ်ကျိုးမငှဲ့ကွက်ဘဲ လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက် တစ်ချို့ကသူ့ကို ရဲလို့တောင် မထင်မိကြပါဘူး.. တစ်ခါသူနဲ့အတူ ခရီးတစ်ခုကိုအတူသွားခဲ့စဉ် လမ်းဘေးမှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးနေတဲ့သက်ကြီးရွယ်အို အဖိုးအိုအဖွားအိုတွေဈေးထိုင်ရောင်းနေ တာကိုတွေ့လိုက်တော့ ချက်ချင်းကားရပ်ပြီး ဈေးမဆစ်ဘဲ အကုန်ဝယ်ပစ်တာမျိုးတွေ့ခဲ့ဖူးတယ် ၊
ထမင်းစားချိန်ရောက်လို့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ထမင်းအတူစားနေရင်း ရဲပီပီဘေး ဘယ်ညာကိုဘယ်အချိန်ကတည်းက အကဲခတ်ခဲ့တာလည်း မသိဘူး ၊ နောက်စားပွဲက ခရီးသွားအာဂန္တု သံဃာတော်ဆရာတော်တွေရဲ့ ဆွမ်းဝိုင်းကိုလမ်းကြုံရင်း အလှူဒါနအဖြစ် ရှင်းပေးလိုက်တာမြင်ခဲ့ဖူးတယ်..ရုပ်ဆွအဆုံး လမ်းဘေးကဆင်းရဲနွမ်းပါးနေသူ ၊ သူဖုန်းစားကအစ ရက်ရက်ရောရောပေးကမ်း စွန့်ကျဲတတ်တဲ့စေတနာကိုတော့ အမှန်တကယ်ဘဲ ကျွန်တော်လေစားမိခဲ့ပါတယ်..( ကျွန်တော်လေးစားတဲ့ သူတွေအထဲမှာ ထိုကဲ့သို့သောသူမျိုးပါ ) ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလက ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေ ၁၀ ယောက်လောက်နဲ့ ဇလွန်ပြည်တော်ပြန် ဘုရားဖူးသွားရင်း ဟင်္သာတဘက်ရောက်တော့ ဒူးယားမြို့လေးကို ကားကဖြတ်မောင်းနေချိန် ချက်ချင်း သူ့ကိုသတိရတာနဲ့ သူ့မြို့ကိုရောက်နေကြောင်း ဖုန်းဆက်အသိပေးလိုက်တော့ တိုက်ဆိုင်စွာဘဲ သူကလည်းသူ့မြို့က ဆရာကန်တော့ပွဲရောက်နေချိန်နဲ့ ကွက်တိဖြစ်နေလေတော့ ” ညီလေးတို့ တစ်ဖွဲ့လုံးကို အကိုထမင်းကြွေးမယ် လာခဲ့ ကွာ ” ဆိုလို့ ဟင်္သာတမြို့က နာမည်ကြီးထမင်းဆိုင် ” ” မှာတစ်ဖွဲ့လုံးဝါးတီးဆွဲဖြစ်ခဲ့သေးတယ်..
ပြောရ ရေးရရင်တော့ ကုန်မည်မထင်ပါဘူး..
ရဲအရာရှိငယ် ဘဝ ယာဉ်ထိန်းရဲတာဝန်ခံလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် တာချီလိတ်မြို့မှာ လမ်း ၄ ဆုံ ၅ နေရာလောက်ကို မီးပွိုင့်တွေရှိလာအောင် သူကိုယ်တိုင်လုပ်ငန်းရှင်တွေ ကနေတဆင့် အကူအညီနဲ့ တပ်ဆင်ပေးခဲ့သလို တာချီလတ်ခရိုင် အတွင်း ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၊ မတ်လက လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့မြေငလျင်ကြီးကြောင့် ပြိုကျပျက်စီးသွားတဲ့ ရှေးဟောင်း လွိုင်ယွန်းခမ်း စေတီတော်ကြီး ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံ တည်ဆောက်ရေးလုငန်းမှာလည်း သူကိုယ်တိုင် ဥက္ကဌအဖြစ် တက်တက်ကြွကြွနဲ့ ဦးစီးလုပ်ကိုင်ခဲ့တာကို မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ အရတွေ့ရှိခဲ့ပြန်တယ်..
မကြာသေးမီကမှ စတင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ တာချီလိတ်မြို့မ သုသာန်သစ် ( ပုံလို့ ) ( မီးသဂြိုလ်စက်နှစ်လုံးပါ ) ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဥက္ကဌအဖြစ်မနားမနေဘဲ တစ်နှစ်အတွင်းပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သလို ယခင်ကပျက်စီးနေတဲ့ ဘောလုံးအားကစားကွင်း နဲ့ မိုးလုံလေလုံ အားကစားရုံကိုလည်း ပြန်လည်ပြုပြင် မွမ်းမံတည်ဆောက်ပေးခဲ့ တဲ့အပြင် တာချီလိတ်မြို့နယ် အားကစားအောင်နိုင်ရေး အထောက်အကူပြုနာယက အဖြစ်တာဝန်လည်း ထမ်းဆောင်နေဆဲပါဘဲ ၊ တာချီလိတ်မြို့နယ် စာရေးဆရာအသင်းဥက္ကဌတာဝန်ယူပြီး စာကြည့်တိုက်ကြီး တစ်ခုကိုအောင်မြင်စွာ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်..
သူဘဝအကြောင်းကို လေ့လာကြည့်မိတဲ့အခါမှာတော့ သူဟာ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၊ ဟင်္သာတမြို့နယ် ဒူးယားကျေးရွာ ( ယခုမြို့နယ်အဆင့် ) လေးက အခြေခံလူတန်းစား တောင်သူလယ်သမားမျိုးရိုး ကနေပေါက်ဖွားလာပြီး ၁၉၇၆ ခုနှစ်မှာ ဖခင်ဖြစ်သူမှာ ခရီးတစ်ခုသွားရင်းရု တ်တရက်ပျောက်ဆုံးသွားလို့ သားဖြစ်သူမှာ ပညာကိုဆုံးခန်းတိုင်အောင် ဆက်လက် မသင်ယူခဲ့ရဘဲ ဖခင်ပျောက်ကို ရှာဖွေရင်းနဲ့ ၁၉၇၈ ခုနှစ်မှာ ရန်ကုန်တိုင်းကနေ ရဲတပ်ဖွဲ့ထဲကို ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး သာယာဝတီ ဆရာစံနယ်မြေမှာ ရဲသင်တန်းဆင်းခဲ့ကာ အခြားအဆင့်နဲ့ စတင်အမှုထမ်းခဲ့သူပါ ။
အထက်တန်း မအောင်မြင်ဘဲ သူရဲ့ကျိုးစားမှုကြောင့် အခြားအဆင့် ( Other Ranks ) ကနေ ဒုတိယရဲမှူး အဆင့်ထိရခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ ရဲသက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာ ဘွဲ့လေး တစ်ခုခုများရခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့ ရဲမှူးကြီးရာထူး အဆင့်အထိ တက်လှမ်းနိုင်မယ့်သူဖြစ်နိုင်သော်လည်း ခုတော့သူနှင့် တစ်ပါတ်စဉ်ထဲတွေသာ ရာထူးတွေတိုးပြီးသူကတော့ တာချီလိတ်မြို့ရဲ့ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေရဲ့ ချစ်ခင်လေးစားမှု နဲ့မြို့မေတ္တာကို ရဲသက်တမ်း တစ်လျှောက် ၊ လူ့ဘဝသက်တမ်း တစ်လျှောက်ပြည့်ပြည့်ဝဝကြီးကို ခံယူသွားနိုင်တဲ့သူ ဆိုတာမြေကြီး လက်ခတ်မလွဲတော့ပါဘူး…
ဒီလိုလူမျိုးကို သာလျှင်မြို့ဂုဏ်ရည်ဆုနဲ့သာ ထိုက်တန်ပါပေသည်..
ဒီလိုပြည်သူချစ် တဲ့ပြည်သူ့ ရဲစစ်စစ်ဖြစ်ဘို့ဆိုတာ ရာထူးကြီးတွေရှိတိုင်း ၊ ပညာတွေ ဘွဲ့ထူး ဂုဏ်ထူးတွေ တစ်သီကြီးရယူထားတိုင်း ဖန်တီးယူလို့မရတာတော့ အသေအချာဘဲဗျ.. ဟိုအရေး ဒီအရေး လင်မယားချင်းရန်ဖြစ်လို့ စခန်းရောက်လာတဲ့အရေး အရေးပေါင်းမျောက်များစွာကို နားချဖျောင်းဖြပြီးပြန်ပေါင်းထုပ်နိုင်အောင် ဖူးစာရေး နတ်မင်းကိုယ်စားလှယ်လည်း ဝင်လုပ်နိုင်တဲ့ ရဲ ဝန်ထမ်းကောင်းတစ်ဦးဟာ အချိန်တန်လို့ပြည်သူ့ရင်ခွင် ကိုပြန်လည်ခိုဝင်ပြီး ထာဝရနားခိုပေမယ့်လည်း ဟိုး….ယခင်ကတည်းက ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့ တစ်သားနဲ့ဖြစ်ခဲ့တာမို့.. အားလုံးကတော့နှမြှော မိကြပါတယ်..
ပိုက်ဆံရှိလုပ်နိုင်တာ မဟုတ်ဘဲ သူဦးစီးပြီး စတင်အကောင်အထည်ဖော်လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းတိုင်းကို ဒေသခံစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေကအစ ဝိုင်းဝန်းရပ်တည်ပေးနိုင်အောင် သူ့မှာပင်ကိုယ် စည်းရုံးရေးစွမ်းရည်က ကောင်းပြီးသားဖြစ်နေလို့ပါဘဲဗျာ
နောက်ဆုံးတော့ ရာထူးဂုဏ်ရှိန်ဂုဏ်ဝါတွေ မှန်သမျှအားလုံးဟာ မှန်ဘောင်ထဲမှာထည့်ပြီး ဧည့်ခန်းမှာ ဝံ့ကြွားချိတ်ထားယုံမှအပ ပြည်သူထဲကပေါက်ဖွားလာတဲ့ဝန်ထမ်းဟာ ပြည်သူ့ရင်ခွင်ထဲမှာ ဘဲပြန်လည်ခိုလှုံနေထိုင်ကြရ တာချည်းမို့ မဖြစ်လောက်ရာထူးတွေနဲ့ သေရင်ယူသွားလို့မရတဲ့ ရာထူးဂုဏ်ပါဝါတွေကြားမှာ အထက်အောက်ငယ်သားပြည်သူများကို ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့စွာပြောဆို ဆက်ဆံတတ်ဘို့ အဓိကလိုအပ်ပါတယ်..နှုတ်ချိုပြည်စိုး ယုံတင်မကပါဘူး ၊ လူ့မင်းနတ်မင်းတွေ ကအစ စိုးမိုးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်..
တစ်ချို့ရာထူးက အနားယူသွားခဲ့ရင် ပြည်သူမပြောနဲ့ လက်ဖော်ကိုင်ဘက် ရဲဘော်ရဲဘက်အပေါင်းနဲ့ တပည့်သားသမီးတွေက လမ်းတွေ့ရင်တောင်မနှုတ်ဆက်ချင်ကြတဲ့သူတွေကို ကိုယ်တွေ့မြင်ဖူးခဲ့တာမို့ မြန်မာပြည်မှာသူလိုပြည်သူ ဘက်တော်သားပြည်သူ့ ရဲဝန်ထမ်းကောင်းတွေ အများကြီးပေါ်ထွက်လာပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း ဤဆောင်းပါလေးနဲ့ ဂုဏ်ပြုရေးသား ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ် မိတ်ဆွေ ဒုတိယရဲမှူး စံသိန်း ( ခေါ် ) မောင်ဖိုးစံ ( ဒူးယား ) ရေ….
အကိုကြီးရဲ့ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ဖခင်ကြီးကိုလည်း ကံမကုန်တဲ့ တစ်နေ့ပြန်ဆုံနိုင်ကြပါစေဗျာ
ကူညီပါရစေ “ ဆိုတဲ့ဆောငျပုဒျ မရှိခငျကတညျးက လူတနျးစား အဆငျ့အတနျးမခှဲခွားဘဲ စိတျစတေနာအရငျးခံနဲ့ ကူညီခဲ့တဲ့ စံပွ ရဲဝနျထမျးကောငျးကွီး မောငျဖိုးစံ ( ဒူးယား )… သို့..ဂုဏျပွုမှတျတမျး
ဖဖေဝါရီလ ၁၄ ရကျနေ့ ၊ တိတိကကြပြွောရရငျ လူငယျခဈြသူစုံတှဲတှေ ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားတဲ့နေ့ မှာ ကြှနျတေျာ့မိတျဆှတေဈယောကျ ၊ ညီရငျးအကိုလို ခဈြခငျရတဲ့ ဒုရဲမှူး စံသိနျးကတော့ သူခဈြတဲ့ မွနျမာနိုငျငံ ရဲတပျဖှဲ့ကွီးကို ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားစှာနဲ့ သကျပွညျ့ပငျစငျယူပွီး ရာသကျပနျ အနားယူလိုကျရတဲ့ ဒီနခေ့ဈြသူမြားနဟေ့ာ သူ့ဘဝအတှကျ ခဈြလြှကျနဲ့စှနျ့ခှာခဲ့ရတဲ့ အမှတျတရနလေ့ေး တဈနပေ့ါဘဲ..
ပွညျသူ့ရဲတပျဖှဲ့မှာ အငျမတနျကို စိတျကောငျးစတေနာကောငျးရှိခဲ့တဲ့ ရဲဝနျထမျးတဈယောကျဖွဈသလို သူနဲ့ကြှနျတျော ခငျမငျရငျးနှီးခဲ့တဲ့ သကျတမျးက နှဈ ၂၀ တငျတငျးရှိခဲ့ပွီမို့ ယခုလိုဂုဏျပွုရေးသားရခွငျးပါ ၊ ကြှနျတေျာ့ လိုဘဲ သူနဲ့ထိတှဆေ့ကျဆံခဲ့ဖူးသူမိတျဆှမှေနျသမြှ ၊ ရဲဝနျထမျးအခငျြးခငျြးမှနျသမြှ သူ့ရဲ့ကောငျးသတငျးတှကေိုဘဲ ခြီးကြူးထောပနာပွု ပွောဆိုနကွေသူတှခေညျြးမို့ အားလုံးနှမွောနကွေမှာပါ…
သူ့ ရဲ့ ရဲလုပျခဲ့တဲ့ သကျတမျးတဈလြှောကျ ရောကျတဲ့နရော ၊ တာဝနျကရြာနရောမှနျသမြှ ဒသေဖှံ့ဖွိုရေးဆိုငျရာအကြိုး ၊ ရပျရှာရဲ့ဘာသာ သာသနာအကြိုး ၊ ဌာနအကြိုးတှကေို ကိုယျကြိုးမငှဲ့ကှကျဘဲ လုပျဆောငျခဲ့တဲ့အတှကျ တဈခြို့ကသူ့ကို ရဲလို့တောငျ မထငျမိကွပါဘူး.. တဈခါသူနဲ့အတူ ခရီးတဈခုကိုအတူသှားခဲ့စဉျ လမျးဘေးမှာ ဆငျးရဲနှမျးပါးနတေဲ့သကျကွီးရှယျအို အဖိုးအိုအဖှားအိုတှဈေေးထိုငျရောငျးနေ တာကိုတှလေို့ကျတော့ ခကျြခငျြးကားရပျပွီး ဈေးမဆဈဘဲ အကုနျဝယျပဈတာမြိုးတှခေဲ့ဖူးတယျ ၊
ထမငျးစားခြိနျရောကျလို့ ဆိုငျတဈဆိုငျမှာ ထမငျးအတူစားနရေငျး ရဲပီပီဘေး ဘယျညာကိုဘယျအခြိနျကတညျးက အကဲခတျခဲ့တာလညျး မသိဘူး ၊ နောကျစားပှဲက ခရီးသှားအာဂန်တု သံဃာတျောဆရာတျောတှရေဲ့ ဆှမျးဝိုငျးကိုလမျးကွုံရငျး အလှူဒါနအဖွဈ ရှငျးပေးလိုကျတာမွငျခဲ့ဖူးတယျ..ရုပျဆှအဆုံး လမျးဘေးကဆငျးရဲနှမျးပါးနသေူ ၊ သူဖုနျးစားကအစ ရကျရကျရောရောပေးကမျး စှနျ့ကြဲတတျတဲ့စတေနာကိုတော့ အမှနျတကယျဘဲ ကြှနျတျောလစေားမိခဲ့ပါတယျ..( ကြှနျတျောလေးစားတဲ့ သူတှအေထဲမှာ ထိုကဲ့သို့သောသူမြိုးပါ ) ။
ပွီးခဲ့တဲ့ ဒီဇငျဘာလက ကြှနျတေျာ့မိတျဆှေ ၁၀ ယောကျလောကျနဲ့ ဇလှနျပွညျတျောပွနျ ဘုရားဖူးသှားရငျး ဟင်ျသာတဘကျရောကျတော့ ဒူးယားမွို့လေးကို ကားကဖွတျမောငျးနခြေိနျ ခကျြခငျြး သူ့ကိုသတိရတာနဲ့ သူ့မွို့ကိုရောကျနကွေောငျး ဖုနျးဆကျအသိပေးလိုကျတော့ တိုကျဆိုငျစှာဘဲ သူကလညျးသူ့မွို့က ဆရာကနျတော့ပှဲရောကျနခြေိနျနဲ့ကှကျတိဖွဈနလေတေော့ ” ညီလေးတို့ တဈဖှဲ့လုံးကို အကိုထမငျးကွှေးမယျ လာခဲ့ ကှာ ” ဆိုလို့ ဟင်ျသာတမွို့က နာမညျကွီးထမငျးဆိုငျ ” ” မှာတဈဖှဲ့လုံးဝါးတီးဆှဲဖွဈခဲ့သေးတယျ..
ပွောရ ရေးရရငျတော့ ကုနျမညျမထငျပါဘူး..
ရဲအရာရှိငယျ ဘဝ ယာဉျထိနျးရဲတာဝနျခံလုပျခဲ့ပွီးနောကျ တာခြီလိတျမွို့မှာ လမျး ၄ ဆုံ ၅ နရောလောကျကို မီးပှိုငျ့တှရှေိလာအောငျ သူကိုယျတိုငျလုပျငနျးရှငျတှေ ကနတေဆငျ့ အကူအညီနဲ့ တပျဆငျပေးခဲ့သလို တာခြီလတျခရိုငျ အတှငျး ၂၀၁၁ ခုနှဈ ၊ မတျလက လှုပျခတျခဲ့တဲ့မွငေလငျြကွီးကွောငျ့ ပွိုကပြကျြစီးသှားတဲ့ ရှေးဟောငျး လှိုငျယှနျးခမျး စတေီတျောကွီး ပွနျလညျပွုပွငျမှမျးမံ တညျဆောကျရေးလုငနျးမှာလညျး သူကိုယျတိုငျ ဥက်ကဌအဖွဈ တကျတကျကွှကွှနဲ့ ဦးစီးလုပျကိုငျခဲ့တာကို မှတျတမျးဓါတျပုံ အရတှရှေိ့ခဲ့ပွနျတယျ..
မကွာသေးမီကမှ စတငျအသုံးပွုခဲ့တဲ့ တာခြီလိတျမွို့မ သုသာနျသဈ ( ပုံလို့ ) ( မီးသဂွိုလျစကျနှဈလုံးပါ ) ဖွဈမွောကျရေးကျောမတီဥက်ကဌအဖွဈမနားမနဘေဲ တဈနှဈအတှငျးပွီးမွောကျအောငျ ဆောငျရှကျခဲ့သလို ယခငျကပကျြစီးနတေဲ့ ဘောလုံးအားကစားကှငျး နဲ့ မိုးလုံလလေုံ အားကစားရုံကိုလညျး ပွနျလညျပွုပွငျ မှမျးမံတညျဆောကျပေးခဲ့ တဲ့အပွငျ တာခြီလိတျမွို့နယျ အားကစားအောငျနိုငျရေး အထောကျအကူပွုနာယက အဖွဈတာဝနျလညျး ထမျးဆောငျနဆေဲပါဘဲ ၊ တာခြီလိတျမွို့နယျ စာရေးဆရာအသငျးဥက်ကဌတာဝနျယူပွီး စာကွညျ့တိုကျကွီး တဈခုကိုအောငျမွငျစှာ ဖှငျ့လှဈနိုငျခဲ့ပါတယျ..
သူဘဝအကွောငျးကို လလေ့ာကွညျ့မိတဲ့အခါမှာတော့ သူဟာ ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီး ၊ ဟင်ျသာတမွို့နယျ ဒူးယားကြေးရှာ ( ယခုမွို့နယျအဆငျ့ ) လေးက အခွခေံလူတနျးစား တောငျသူလယျသမားမြိုးရိုး ကနပေေါကျဖှားလာပွီး ၁၉၇၆ ခုနှဈမှာ ဖခငျဖွဈသူမှာ ခရီးတဈခုသှားရငျးရု တျတရကျပြောကျဆုံးသှားလို့ သားဖွဈသူမှာ ပညာကိုဆုံးခနျးတိုငျအောငျ ဆကျလကျ မသငျယူခဲ့ရဘဲ ဖခငျပြောကျကို ရှာဖှရေငျးနဲ့ ၁၉၇၈ ခုနှဈမှာ ရနျကုနျတိုငျးကနေ ရဲတပျဖှဲ့ထဲကို ဝငျရောကျခဲ့ပွီး သာယာဝတီ ဆရာစံနယျမွမှော ရဲသငျတနျးဆငျးခဲ့ကာ အခွားအဆငျ့နဲ့ စတငျအမှုထမျးခဲ့သူပါ ။
အထကျတနျး မအောငျမွငျဘဲ သူရဲ့ကြိုးစားမှုကွောငျ့ အခွားအဆငျ့ ( Other Ranks ) ကနေ ဒုတိယရဲမှူး အဆငျ့ထိရခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ ရဲသကျတမျးတဈလြှောကျမှာ ဘှဲ့လေး တဈခုခုမြားရခဲ့မယျ ဆိုရငျတော့ ရဲမှူးကွီးရာထူး အဆငျ့အထိ တကျလှမျးနိုငျမယျ့သူဖွဈနိုငျသျောလညျး ခုတော့သူနှငျ့ တဈပါတျစဉျထဲတှသော ရာထူးတှတေိုးပွီးသူကတော့ တာခြီလိတျမွို့ရဲ့ဒသေခံ တိုငျးရငျးသားပွညျသူတှရေဲ့ ခဈြခငျလေးစားမှု နဲ့မွို့မတ်ေတာကို ရဲသကျတမျး တဈလြှောကျ ၊ လူ့ဘဝသကျတမျး တဈလြှောကျပွညျ့ပွညျ့ဝဝကွီးကို ခံယူသှားနိုငျတဲ့သူ ဆိုတာမွကွေီး လကျခတျမလှဲတော့ပါဘူး…
ဒီလိုလူမြိုးကို သာလြှငျမွို့ဂုဏျရညျဆုနဲ့သာ ထိုကျတနျပါပသေညျ..
ဒီလိုပွညျသူခဈြ တဲ့ပွညျသူ့ ရဲစဈစဈဖွဈဘို့ဆိုတာ ရာထူးကွီးတှရှေိတိုငျး ၊ ပညာတှေ ဘှဲ့ထူး ဂုဏျထူးတှေ တဈသီကွီးရယူထားတိုငျး ဖနျတီးယူလို့မရတာတော့ အသအေခြာဘဲဗြ.. ဟိုအရေး ဒီအရေး လငျမယားခငျြးရနျဖွဈလို့ စခနျးရောကျလာတဲ့အရေး အရေးပေါငျးမြောကျမြားစှာကို နားခဖြောငျးဖွပွီးပွနျပေါငျးထုပျနိုငျအောငျ ဖူးစာရေး နတျမငျးကိုယျစားလှယျလညျး ဝငျလုပျနိုငျတဲ့ ရဲ ဝနျထမျးကောငျးတဈဦးဟာ အခြိနျတနျလို့ပွညျသူ့ရငျခှငျ ကိုပွနျလညျခိုဝငျပွီး ထာဝရနားခိုပမေယျ့လညျး ဟိုး….ယခငျကတညျးက ဒသေခံပွညျသူတှနေဲ့ တဈသားနဲ့ဖွဈခဲ့တာမို့.. အားလုံးကတော့နှမွှော မိကွပါတယျ..
ပိုကျဆံရှိလုပျနိုငျတာ မဟုတျဘဲ သူဦးစီးပွီး စတငျအကောငျအထညျဖျောလုပျကိုငျခဲ့တဲ့ လုပျငနျးတိုငျးကို ဒသေခံစီးပှားရေး လုပျငနျးရှငျတှကေအစ ဝိုငျးဝနျးရပျတညျပေးနိုငျအောငျ သူ့မှာပငျကိုယျ စညျးရုံးရေးစှမျးရညျက ကောငျးပွီးသားဖွဈနလေို့ပါဘဲဗြာ
နောကျဆုံးတော့ ရာထူးဂုဏျရှိနျဂုဏျဝါတှေ မှနျသမြှအားလုံးဟာ မှနျဘောငျထဲမှာထညျ့ပွီး ဧညျ့ခနျးမှာ ဝံ့ကွှားခြိတျထားယုံမှအပ ပွညျသူထဲကပေါကျဖှားလာတဲ့ဝနျထမျးဟာ ပွညျသူ့ရငျခှငျထဲမှာ ဘဲပွနျလညျခိုလှုံနထေိုငျကွရ တာခညျြးမို့ မဖွဈလောကျရာထူးတှနေဲ့ သရေငျယူသှားလို့မရတဲ့ ရာထူးဂုဏျပါဝါတှကွေားမှာ အထကျအောကျငယျသားပွညျသူမြားကို ယဉျကြေးသိမျမှစှေ့ာပွောဆို ဆကျဆံတတျဘို့ အဓိကလိုအပျပါတယျ..နှုတျခြိုပွညျစိုး ယုံတငျမကပါဘူး ၊ လူ့မငျးနတျမငျးတှေ ကအစ စိုးမိုးနိုငျစှမျးရှိပါတယျ..
တဈခြို့ရာထူးက အနားယူသှားခဲ့ရငျ ပွညျသူမပွောနဲ့ လကျဖျောကိုငျဘကျ ရဲဘျောရဲဘကျအပေါငျးနဲ့ တပညျ့သားသမီးတှကေ လမျးတှရေ့ငျတောငျမနှုတျဆကျခငျြကွတဲ့သူတှကေို ကိုယျတှမွေ့ငျဖူးခဲ့တာမို့ မွနျမာပွညျမှာသူလိုပွညျသူ ဘကျတျောသားပွညျသူ့ရဲဝနျထမျးကောငျးတှေ အမြားကွီးပျေါထှကျလာပါစလေို့ ဆုတောငျးရငျး ဤဆောငျးပါလေးနဲ့ ဂုဏျပွုရေးသား ဂုဏျပွုလိုကျပါတယျ မိတျဆှေ ဒုတိယရဲမှူး စံသိနျး ( ချေါ ) မောငျဖိုးစံ ( ဒူးယား ) ရေ….
အကိုကွီးရဲ့ ပြောကျဆုံးသှားတဲ့ ဖခငျကွီးကိုလညျး ကံမကုနျတဲ့ တဈနပွေ့နျဆုံနိုငျကွပါစဗြော